Ngwunye nke na-etinye eriri carbon fiber na eriri aluminom
Home / ngwa / Ọkụ na-egbuke egbuke / Itinye n'ọkwa carbon carbon tube
Category: Ọkụ na-egbuke egbuke Tags: carbon eriri itinye n'ọkwa debonding, agbagha, HF na-agbagha, HF debonding okpomọkụ, itinye n'ọkwa debonding, Ngwunye ihe ndozi, itinye eriri na-edozi ya, induction debonding okpomọkụ, itinye n'ọkwa kpo oku, igwe nkpuchi ihe eji abanye, usoro nhazi usoro
Ngwunye nke na-etinye eriri carbon carbon na eriri igwe
ebumnobi: Iji kpoo ikuku carbon (ụlọ agha) nke nwere ihe aluminom na 600 ºF (316 ºC) iji kpochapu mpempe akwụkwọ ahụ.
Materials: 5 ”(127 mm) okpukpu kporo carbon nke bu 20‘ (6.1 m) n’ogologo na 24 ”(610 mm) n’obosara. Ọ gụnyere 52
Okpomọkụ: 600 ºF (316 ºC)
Frequency: 60 kHz
Itinye n'ọkwa Heating Equipment: DW-UHF-45kW / 100 kHz induction usoro oku eji ya na ebe di oku di omimi nke nwere ihe ntinye 1.0 μF
- A ntutu isi induction kpo oku haziri ma mepụtara maka ngwa a
Usoro A na-agbanye ike ahụ ma na-etinye eriri ntutu isi n'akụkụ akụkụ nke tube / ụlọ ya na eriri igwe na padding. Urethane malitere kpoo ọkụ ma na-afụ afụ. Ejiri ike dị nro iji nyere aka wepu pad ahụ na liner. Achọpụtakwara na enwere ike iwepụ aluminom na tube ahụ.
Usoro kpo oku a emeputaghi adighi emetuta akwara carbon, nke bu ihe choro na olile anya.
Nke a bụ ekele maka igwe nyocha na-ekpo ọkụ n'akụkụ ya na eriri igwe.
Nsonaazụ Heating Induction / Benefits
- Ichebe ụlọ ahụ: Ugbo oku nwere ike kpoo ọkpọkọ ahụ iji kpochapụ ihe mkpuchi ahụ na akàrà, ma ka na-echekwa tube carbon carbon nke na-eme ka ụlọ ahụ nwee ike
- Ihe nchekwa ihe: Site n'inwe ike ichebe carbon fiber tube, a na-enweta ihe nchekwa ego dị ukwuu
- Nzaghachi: HLQ nwere ike ịme nyocha ụlọ nyocha n'efu ma mepụta usoro nke nwere ike ịkpata
ego buru ibu nye onye ahịa.
Ngwunye ọkụ ọkụ ọkụ
induction kpo oku
Ngwongwo na-ekpo ọkụ na-egbu egbu nke Mkpanaka, Billets, Bars
Itinye n'ọkwa kpo oku arịa Reactors